Rainn Wilson – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Don’t TellaSoul (2020) Unicode IMDbမှာ 5.9 အထိ ရထားတဲ့ Thriller ကားကောငျးလေးပါ။ ဆယျကြျောသကျအရှယျ မကျနဲ့ ဂြိုဝီတို့က နမေကောငျးဖွဈနတေဲ့ အမဖွေဈသူရဲ့ ဆေးဝါးစရိတျတှေ အတှကျ သကျကွီးရှယျအိုတှနေတေဲ့ အိမျကို လူတှေ မရှိခြိနျမှာ ပိုကျဆံတှေ သှားခိုးကွပါတယျ … တဈခုခုဆို ကွောကျတတျပွီး ရိုးရိုးအေးအေးလေး နတေတျတဲ့ ဂြိုဝီဟာ မကျလို့ ချေါတဲ့ အကို ကွိုးဆှဲရာ ကရတဲ့ ရုပျသေးရုပျလေးဖွဈတယျ အကို့ကိုလညျး ကွောကျကလညျးကွောကျ …. ပိုကျဆံသှားခိုးဖို့လဲမိမှာ ကွောကျနရှောတဲ့ ဂြိုဝီဟာ အကို ခိုငျးသမြှ ကွောကျကွောကျလနျ့လနျ့နဲ့ လုပျခဲ့ရရှာပါတယျ …. ပိုကျဆံခိုးရငျး သူတို့ ညီအကိုနှဈယောကျဟာ လုံခွုံရေး အစောငျ့နဲ့ တှပွေီ့း ကိစ်စရပျတှဟော စီစဉျထားသလို ဖွဈမလာခဲ့ရတာကနေ ဒီဇာတျလမျးလေးကို သဲထိပျရငျဖို အဆုံးထိ ဆှဲချေါသှားပါတယျ…. ဝိဉာဉျကိုတောငျမှ ပွောပွလို့မရတဲ့ သဲထိပျရိပျဖို Drama ကားကောငျးလေး ဖွဈတာကွောငျ့ မိတျဆကျပေးလိုကျပါတယျ Credit Review ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Win Su Lei Myat ဖွဈပါတယျ Zawgyi IMDbမှာ 5.9 အထိ ရထားတဲ့ Thriller ကားကောင်းလေးပါ။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ...
IMDB: 5.8/10 2057 votes
Transformers: Revenge of the Fallen (2009) Unicode Transformers ရဲ့ဒုတိယမွောကျဇာတျကားလေးဖွဈပါတယျ။ ဆမျ ဝဈဝဈကီ က အျောတိုဘော့တှနေဲ့ကြောခိုငျးပွီးတော့ သာမနျလူတဈယောကျအနနေဲ့ နထေိုငျဖို့ဆုံးဖွတျပွီးတော့ ကောလိပျ တကျဖို့သှားခါနီးမှာဘဲ ပထမ Transformers တုနျးကကနျြရှိနသေေးတဲ့ ကုဗတုံး ရဲ့စှမျးအငျအပိုငျးအစလေးကိုထိမိတဲ့အခါမှာတော့ မထငျမှတျထားတဲ့ သင်ျကတေတှကေို မွငျမိပွီးတော့ ဒီဆပျတငျကှနျ တှရေဲ့ ပဈမှတျက သူ့စီကိုရောကျလာတဲ့အခါမှာတော့… Credit Review Zawgyi Transformers ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆမ် ဝစ်ဝစ်ကီ က အော်တိုဘော့တွေနဲ့ကျောခိုင်းပြီးတော့ သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ နေထိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ ကောလိပ် တက်ဖို့သွားခါနီးမှာဘဲ ပထမ Transformers တုန်းကကျန်ရှိနေသေးတဲ့ ကုဗတုံး ရဲ့စွမ်းအင်အပိုင်းအစလေးကိုထိမိတဲ့အခါမှာတော့ မထင်မှတ်ထားတဲ့ သင်္ကေတတွေကို မြင်မိပြီးတော့ ဒီဆပ်တင်ကွန် တွေရဲ့ ပစ်မှတ်က သူ့စီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့… Credit Review
IMDB: 6.0/10 367,639 votes
The Meg (2018) သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားတွေကိုမှ ကြိုက်နှစ်သတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မင်းသားကြီး Jason Statham ပါဝင်သရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ ငါးမန်းကား The MEG 2018 ဇာတ်ကားကို မြန်မာစာတန်းထိုးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီကားထဲမှာ Jason ဟာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ရေအောက်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတစ်ယောက်ပါ ။ တနေ့မှာ ပင်လယ်ရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာမှာ ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေစဉ် ထူးဆန်းတဲ့ အဖြစ်ပျက်တစ်ခုနဲ့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတာကြောင့် ကယ်ဆယ်ရေးအစီစဉ်ပျက်ဆီးပြီး လူပေါင်းများစွာလည်း သေဆုံးခဲံရပါတယ် အဲဒီ့နောက်မှာ Jason လည်းသူတွေ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်ပျက်တွေကို ပြန်လည်ပြာပြခဲ့ပေမယ့် ဘယ်သူမှ လက်မခဲံခဲံကြပါဘူး။ သူလည်း အလုပ့်နေထွက်လိုက်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့ မှာတော့ ဒီနေရာကို ပြန်သွားရမယ့်အချိန် ကျရောက်လာပါတော့တယ် ..... Jason တစ်ယောက် မကောင်းဆိုးဝါးကြီးနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲ ဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတာကို သူငယ်ချင်းတွေ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ ကြည့်လို့ ရအောင် မြန်မာစာတန်းထိုးလေးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ် ။ Credit Review
IMDB: 5.7/10 99,921 votes